ePR waa Jebinta Suuqgeynta ... Yurub | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 15, 2019 Monday, August 19, 2019 Luke Budka
GDPR waxaa la soo saaray May 2018 waana fiicneyd. Waa hagaag taasi waa fiditaan. Cirku ma uusan dhicin oo qof walbana maalintiisa ayuu iska watay. Qaar ka mid ah kuwa aan kala go 'lahayn ayaa ka badan kuwa kale. Sababta Sababtoo ah waxay hubisay in si xor ah loo siiyay, ogolaansho cayiman, xog ogaal ah oo aan mugdi ku jirin ayaa hadda looga baahan yahay muwaadin reer Yurub ah ka hor inta shirkaddu u dirin iyaga email.
Laakiin aan dib u soo koobno.
Sow moobiilada waaweyn ee suuqgeynta suuqgeynta adduunka, HubSpots, Marketos iwm ma aysan noo sheegin waxa ku jira waa boqorka?
Hadaad abuurto, oo aad kadhigto, oo aad horumariso, way imaan doonaan!
Abuur content x10 champion, u hagaaji, ka qor oo rajadiisuna way heli doonaan, soo dejiso oo bal eeg waxaad heli doontaa faahfaahinta xiriirkooda waxaadna awood u yeelan doontaa inaad ku koriso iyaga oo isticmaalaya ololeyaal emayl otomaatig ah oo leh digniino loogu talagalay inay kula socodsiiyaan markay yihiin diyaar u ah inay iibsadaan (maxaa yeelay waxay ku jiri doonaan websaydhkaaga iyagoo fiirinaya halka ugu hooseysa ee maadada tusaalaha tusaale ahaan daraasadaha kiisaska, demo vids iwm).
Mar dambe maahan - maaha adduunka B2C si kastaba ha noqotee. Markay soo dejistaan ​​waxyaabaha x10 ee horyaalnimada ah, oo ay ka tagayaan faahfaahintooda xiriirka, waa inay saxeexaan sanduuq yar oo oranaya:
Waan ku faraxsanahay inaad ii soo dirto fariin iib ah iyo farriin suuq ah mararka qaarkood.
Marka… yaa doonaya inuu doorto inuu doorto iibinta iyo farriimaha suuqgeynta?
Oo sidaas awgeed waxyaabaha soo-saarka / soo-galinta / iimaylka dhaqameed ee soo-jiidashada-kobcinta-dhow ayaa hadda loo jaray suuq-geynta B2C.
Kadib waxaa yimid dhawaqa qosol daciifa.
"Waa maxay buuqaasi?”Ayay yiraahdeen suuqleyda B2C, wajigooda oo ilmo wasakheysan ayaa raadinaya ciqaab daran.
Waxay ahayd buuqii suuqleyda B2B.
Waxaad arkaysaa GDPR ma curyaaminin suuqgeynta iimaylka B2B (taas oo had iyo jeer dhaqan ahaan xoogaa ka yara dabacsan). Waxaad si fudud hadda ugu baahnayd inaad caddeyso inaad aasaas sharci ah u lahayd isgaarsiinta emaylka qabow. Waxay noqon kartaa ogolaansho. Laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa interest dan sharci ah. Ilaa intaad awoodid:
… Muuji sida aad u isticmaasho xogta dadka waa saami, waxay leedahay saameyn yar oo qarsoodi ah, dadkuna layaabi maayaan ama uma badna inay diidaan waxaad sameyneyso…
Xafiiska Wakiilka Warfaafinta, Shuruucda ku xeeran ganacsiga suuq geynta ganacsiga, GDPR iyo PECR
Oo suuqleyda B2B waxay samaysteen caws inta qorraxdu iftiimayso.
Ma ifin muddo aad u dheer in kastoo.
Xeerka Gaarka ah
Xeerka ePrivacy (ePR oo gaaban) wuxuu badalayaa dardaaranka ePrivacy ee hada jira ee yurubiyanka (kaas oo waligiis siyaabo aad u kala yar uga duwan dhamaan wadamada xubnaha ka ah EU - UK waxaa loo yaqaanaa PECR).
The DMA ayaa soo warisay Bishii Luulyo ee sanadkii hore in ePR ay u baahan tahay… 'ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo lagu oggolaado dhammaan suuqgeynta iimaylka B2B'.
Liisas badan ma jiraan. Looma soo dejinayo wax ka badan oo ku saabsan faahfaahinta xiriirka Nabadgelyo B2B suuqgeyn email. Tani waa weyn.
Tusaale ahaan, waxaan aad uga shaqeeyaa waaxda IT-ga ee UK waxbadan. Kanaalka IT-ga waxaa aasaasiyan lagu dhisay tallaalada emaylka. Warshado badan oo B2B ah ayaa ah. Khaladaadkeeda oo dhan, wali waxay siisaa ROI soo jiidasho leh iyo shirkado badan oo yaryar, waa nooca kaliya ee suuq geyn ay u maleynayaan inay awoodaan (inbadan intaas kadib).
Qof kasta oo idinka mid ah oo u maleynaya in sharcigan uu u muuqdo mid aan macquul ahayn oo adag oo suuqgeynta emailka B2B ayaa laga yaabaa inay fiicnaato, sidoo kale waa mudan tahay in la tixgeliyo saameynta ePR ay ku yeelan doonto cookies.
Bishii Maarso ee sanadkan, lataliye madax-bannaan oo ka tirsan maxkamadda ugu sareysa Midowga Yurub, Advocate General Szpunar, ayaa soo saaray opinion on cookies oo asal ahaan la sheegay in sanduuqa ogolaanshaha cookie ee horay loo saxay uusan buuxin shuruudaha ogolaanshaha saxda ah maadaama ogolaanshaha uusan aheyn mid firfircoon mana ahan mid si xor ah loo bixiyay.
Immisa websaydh ayaad booqataa iyadoo feedhyahannada cookie-ka ee horay loo sii calaamadiyey? Intooda badani sax?
Waxaan si dhab ah u eegaynaa mustaqbal aanad emayl ugu soo diri karin shaqsiyaadka shirkadaha (haddii ay iyagu raalli ka yihiin mooyee) mana la socon kartid shakhsiyaadka markay ku jiraan websaydhkaaga (inay doortaan mooyee cookies-ka mooyee). Qaybaha buskudka ee waxsii sheegistaan ​​hadda waxay ku yimaadeen UK dhexdeeda: the ICO waxay leedahay ogolaansho ayaa looga baahan yahay cookies-ka aan muhiimka ahayn oo waad qiyaastay, falanqaynta waxay ku dhacdaa isla qaybta aan muhiimka ahayn (u gudub bogga internetka ee ICO - gorfaynta ayaa lagu demiyaa asal ahaan * gaaska cabsida *).
EPR waxay ahayd in lasii daayo GDPR laakiin dib ayuu udhacay. Waxay qaadataa waqti in lagu ansixiyo wax ka beddelka Baarlamaanka Yurub mana jiro taariikh rasmi ah oo lagu sii deyn karo (dhowr bog oo sharci ah ayaa laga yaabaa inaysan ka hor dhicin 2021) laakiin way soo socotaa waxaana jira waqti yar oo qaali ah oo la isku diyaariyo.
Haddii aad ugu yeerto funnel ama duufaan, qaabkii hore ee soo galitaanka ayaa u muuqda mid jabay.
Marka waxaan waydiinay rafiiqayaga suuq geynta suuq geynta waxa laqabto (kan erey ahaan wada hadal emayl waxaa laga heli karaa bartayada), laakiin TL: DR: iska ilow barbaarinta, u tag hoosta masafka, diyaar u ah inaad iibsato raadad - rajo aad u sarreeya.
Aniguna waan heshiin kari waayey.
Waxyaabaha wanaagsan ayaa ah, SEO (si sax ah ayaa loo sameeyay), wali aad buu u nool yahay waana laad. Raadinta dabiiciga ah wali waxay soo qaadataa inta badan ee qasabadaha iyo xayeysiinta lacag bixinta ah (waa kan xogta gujiska ugu dambeysay taasna) oo Google waxay kaa dooneysaa inaad saxdo SEO-ga waxayna ka dhigtay mid ka fudud sidii hore hagayaal weyn iyo nooc la cusbooneysiiyay oo ah Console Search.
Ku billow tixgelinta saamaynta ay ePR ku yeelan karto ganacsigaaga. Intee in le'eg ayaad ku tiirsan tahay suuqgeynta iimaylka? Immisa ka mid ah keydka macluumaadkaaga B2B ayaa doortay? Dib ma u sii oggolaan kartaa iyaga ka hor? Ma u baahan tahay inaad dib-u-habeyn ku sameyso dadaalada otomatiga suuq-geynta si aad diirada u saarto kor u qaadista macaamiisha jirta halkii aad kobcin lahayd kuwa cusub? Miyaad si firfircoon uga shaqeyneysaa boggaaga raadinta dabiiciga ah? Iyo tan ugu muhiimsan, maxaad hadda samaynaysaa waxaad u baahan tahay isticmaaleyaal si ay u oggolaadaan in lagugula socdo bartaada? Samee kanaalkaaga kale kala sooc oo diyaar u ah inaad soo qaadato dabacsanaanta, ka dibna mar kasta oo ePR la soo bandhigo, nooc kasta oo ay ugu dambayntii qaadato, lagugama tegi doono inaad qaybaha soo qaadatid.
Tags: b2blahaanshosharci dejintaeusuuqopecrqawaaniinta asturnaantaXeerarkii
Luke Budka wuxuu agaasime ka yahay TopLine Comms, oo ah hay'ad dijitaal ah PR iyo SEO.